Nilaza ny filoham-pirenena IBM fa mety haharitra roa taona | Avy amin'ny mac aho
Heatsink vaovao sy tariby anatiny
Raha ny fanazavan'ny filohan'ny IBM Jim Whitehurst tamin'ny BBC dia mety haharitra roa taona ny tsy fisian'ny Chips. Ny orinasan-teknolojia malaza izay nifaninana tamin'i Apple tamin'ny lasa ho an'ny fandrosoana sy ny varotra solosaina manokana dia manazava fa ny tombana ho an'ny fatiantoka mihoatra ny 110.000 miliara dolara amin'ity taona ity eo amin'ny sehatry ny fiara noho ny tsy fahampian'ny singa.
Saingy ny indostrian'ny teknolojia dia tsy misy olana ary lojika dia tokony holazaina fa ny olana amin'ny famokarana puce sy microchip izay miditra ao anatin'ireo fitaovana elektronika rehetra ampiasaintsika isan'andro.
Manomboka amin'ny fanemorana bebe kokoa amin'ny fandefasana ka hatrany amin'ny tsy fahampian'ny tsipika famokarana
Amin'ny farany, ny zavatra tsikaritry ny mpanjifa dia ela kokoa noho ny nandrasana ny fandefasana azy ary tsy afaka mahazo ny singa hamory ireo fitaovana ireo andalana famokarana ary mitranga izany amin'ny tara fahatarana amin'ny fotoana fandefasana.
Hitanay izany amin'ny console, fiara, solosaina, smartphone, fitaovana ary karazana fitaovana elektronika rehetra. Mazava fa olana ho an'ny mpanamboatra sy ny mpampiasa azy io, izay mahita ny fanirian'izy ireo hividy vokatra sorena noho ny tsy fahampiana.
Raha izao isika dia handeha fa ny andrasana amin'ny fanemorana dia mandritra ny fotoana maharitra ary efa misy mieritreritra fa haharitra roa taona tahaka ny nataon'ny filohan'ny IBM mihasarotra kely io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Nilaza ny filoham-pirenena IBM fa mety haharitra roa taona mahery ny tsy fahampian'ny chip